Kamiao “citerne” latsaka tao ambany tetezana: vehivavy iray maty tsy tra-drano, olona iray mbola karohina | NewsMada
Kamiao “citerne” latsaka tao ambany tetezana: vehivavy iray maty tsy tra-drano, olona iray mbola karohina
Ankoatra ilay mpamily izay naratra mafy sy ny mpanampy azy izay mbola tsy hita, vehivavy iray no maty tsy tra-drano. Izay no vokatry ny fivarinan’ity kamiaobe mpitondra solika, latsaka tao ambany tetezana, teny amin’ny lalampirenena fahefatra, 40 Km tsy hidirana an’i Maevatanàna, afakomaly.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona indray ny lalam-pirenena faha-4, ny alarobia teo tamin’ny 06 ora sy sasany, teo amin’ny 40 km tsy idirana an’i Maevatanàna. Kamiao « citerne » tsy nitondra entana avy any Mahajanga hihazo ny Renivohitra ny nilatsaka teny amin’ny tetezana Zafy Albert. Vokany, maty tsy tra-drano tamin’izany ny vehivavy iray raha mbola tsy hita kosa ny mpanampy ny mpamilin’ilay kamiao, hatramin’ny ora farany nanoratanay. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa naratra mafy ny mpamily ary tapaka nandritra ny loza ny tanany sy ny tongony havanana. “Teo anelanelan’i Nosikely sy i 5×5 ny nitrangan’ny loza. Nandeha mafy ny mpamily tamin’izany ary ka tsy voafehiny ny familiana”, hoy ny fanazavan’ny zandary ao Maevatanàna. Tsy vitan’ny fandehanana mafy, hoy ihany ny zandary, fa mbola mamo ihany koa izy tamin’izany. Manamarina izany, hoy ny tatitra ny fahitana ireo tao anatin’ilay kamiao taorian’ny loza.
Fantatra tamin’izany fa tsy nahazo ny “virage” hiditra ny tetezan’i Zafy Albert ilay fiara ka nilatsaka avy hatrany any ambanin’ny tetezana, izay mahatratra 25 metatra ny haavony miala ny rano. Voalaza tamin’izany fa tsy mbola hita ny mpanampin’ny mpamily taorian’ny loza. Ireo zandary kosa, nanazava fa mety ho voatsindrin’ireo “cabine” an’ilay fiara io lehilahy io.
Taorian’ny loza, nalefa vonjimaika eny amin’ny hopitalin’i Maevatanàna ilay mpamily sy ny sakaizany io. Ity farany izay ao amin’ny tranom-patin’ny hopitalin’i Maevatanàna. Nisy ihany ny fiantsoana ny fianakavian’io vehivavy manodidina ny 26 taona io any Mahajanga. Efa nampilazana momba ny loza ihany koa ny tompon’ny fiara. Ilay mpamily manodidina ny 45 taona kosa, mbola manohy ny fitsaboana azy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola tsy hita ilay mpanampin’ny mpamily ary mitohy ny fikarohana azy. Voalaza ihany koa fa ao an-toerana ilay kamiao io ankehitriny. Efa nampilaza ny tompon’andraiki-panjkana momba ny fanarenana ilay tetezana simba ihany koa ny zandary.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana ihany koa fa 3 km miala io tetezana io no misy an’Ambalabonga. Ireo polisy misahana ny fifamoivoizana tao an-toerana no nampilaza ny TF 55 Berivotra. Ireto farany izay nampian’ny zandarimarian’i Maevatanàna.